विराटनगर- राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुग्ने बताएका छन् ।
बुधवार विराटनगरमा रहेको नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गर्भनर डा. नेपालले पछिल्लो समयमा आर्थिक गतिविधि र कर्जाको प्रवाह बढ्नुलाई सकारात्मक लिँदै आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने स्पष्ट पारेका हुन् । उनले पछिल्लो समयमा भएका आर्थिक गतिविधिलाई हेर्दा आशालाग्दा कामहरू शुरू भएको बताउँदै कर्जा वृद्धि २२ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए ।
कर्जा वृद्धिलाई हेर्दा यसले गलत ट्र्याक लिन्छ कि भन्ने समेत चिन्ता रहेको हुँदा कहिलेकाहिँ निर्देशन दिनुपर्ने र होल्ड गर्नुपर्ने अवस्था समेत आएको बताए ।
उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जनताको पैसा लिएर मनपरी गर्ने छुट कसैलाई नदिइएको स्पष्ट पारे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई थप मनपरी हुनबाट रोक्नको लागि सञ्चालकको दबाबमा प्रमुख कार्यकारीले मनपरी बैंकको ब्याज बढाउने गरेको गुनासालाई ध्यानमा राखेर अब सीईओ राख्दा नै राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएको व्यक्ति बाहेकलाई राख्न नपाउने व्यवस्था लागू गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
‘अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिएर मात्र प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गर्नुपर्नेछ,' उनले भने, ‘कस्तो व्यक्ति आउने र उनले गर्ने गतिविधिपछि राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिनेछ ।’
समस्याग्रस्त १६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मध्ये १४ वटा सञ्लानमा आइसकेको र बाँकी २ वटा समेत पुन: संचालनको तयारीमा रहेको उनले बताए । अहिले जेमा पनि लगानी गर्दा फाइदा लिन सक्ने भएकोले गलत रूपमा लगानी नहोस् भन्नका लागि राष्ट्र बैंक सचेत रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
व्यापारीको ब्याजदर त्रास
विराटनगरका व्यापारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नाफामुखी भएको आरोप लगाएका छन् । बैंकले व्यापारीलाई पेल्ने काम गरेको व्यवसायीले आरोप लगाएका हुन् । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवन कुमार सारडाले बैंकहरू नाफाखोर भएको बताएका हुन् । राष्ट्र बैंकले उद्योग तथा व्यवसाय पनि सहज रूपमा चल्ने वातावरण बनाउन सम्बन्धित निकायसँग माग गरे ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भिम घिमिरेले बैंकको ब्याजदरका कारण उद्योगी व्यापारीलाई अफ्ट्यारो पार्ने काम भएको बताएका छन् । अत्याधिक नाफा कमाउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई छुट दिएको आरोप लगाउँदै कारवाही गर्नुपर्ने माग अघि सारे । ‘हामी व्यापारीले २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा कमाए कालोबजारीमा जेल हालिन्छ,' घिमिरेले भने, ‘बैंकहरूले अर्बौं मुनाफा कमाउँदा पनि वास्ता किन नभएको हो स्पष्ट हुनु पर्‍यो ।’
नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले ३ करोड ११ लाख ३५ हजारको लागतमा भवनको निर्माण सम्पन्न गरेको हो । भवन निर्माणसँगै भाडामा रहेको बैंकको केन्द्रीय कार्यालय आफ्नै भवनमा सरेको प्रबन्धक सञ्चालक मणीकुमार अर्ज्यालले जानकारी दिए । नेपाल ग्रामीण विकास समाज केन्द्रको नाममा शुरू भएको वित्तीय संस्था अहिले नेरुडे लघुवित्त विकास बैंकको रूपमा सञ्लान हुँदै आएको छ । देशका ३० जिल्लामा ८८ शाखामार्फत सेवा प्रवाह गर्दै आएको यस वित्तीय संस्थामा १ लाख ३२ हजार सदस्यहरूमा ८४ हजार २ सय ९५ घर परिवारमा पुगेको अर्ज्यालले बताए ।
आगामी दिनमा ७७ जिल्लामा नै सेवा प्रवाह गर्नको लागि तयारी भइरहेको अर्ज्यालले जानकारी दिए । ४ अर्ब ६६ करोड ऋण लगानी तथा १ अर्ब ७७ करोड बचत गर्दै यस वित्तीय संस्थाको हाल ३० करोड ७६ लाख ४७ हजार चुक्ता पुँजी रहेको सोही अवसरमा जानकारी दिइएको थियो ।